တရုတ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပြန်လည်သုံးနိုင်သောအံဆွဲအိတ် Cinch Bag စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Sungnan
အကောက်ခွန်မြှင့်တင်ရေးပုံနှိပ်ခြင်း Reusable Drawstring Bag Cinch Bag
ကြိုးဆွဲကြိုးကျောပိုးအိတ်သည်အလွန်ကောင်းသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဒါဟာဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်မှာသေချာပါတယ် အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ
ပုံစံနံပါတ် - SN-B1102
ထုတ်ကုန်အမည် အကောက်ခွန်မြှင့်တင်ရေးပုံနှိပ်ခြင်း Reusable Drawstring Bag Cinch Bag
ပုံဆွဲအိတ်: နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ခါးပတ် ၂ ခုနှင့်အောက်ခြေထောင့်များသည်နူးညံ့သောအထည်အလိပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျောင်းလွယ်အိတ်ကိုပိတ်ရန်ကြိုးကိုသင်ဆွဲယူနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျောပိုးအိတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အရာရာကိုလျင်မြန်စွာသိမ်းဆည်းပြီးလွယ်ကူစွာသိမ်းနိုင်သည်။
ပစ္စည်း: ဤအိတ်သည်ပျော့ပျောင်းသော polyester ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် anti-wrinkle နှင့်ကောင်းသောပုံစံကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အလွယ်တကူရေချိုးနိုင်သော၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော၊ ရေစိုခံနိုင်သော၊ ခေါက်သိမ်းနိုင်သော၊ ပေါ့ပါးခြင်း။
အေးမြဒီဇိုင်းပုံနှိပ်ဒီဇိုင်းသည်အလွန်စတိုင်ကျ။ အလွယ်တကူရေချိုးနိုင်သည်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကြာရှည်ခံသည်။ ညှိနိုင်သောသိုင်းကြိုးဒီဇိုင်းသည်သင်၏လက်များကိုလွတ်စေပြီးပခုံးဝန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ချစ်စရာကောင်းသောကာတွန်းဆောင်ပုဒ်သည်လူအများကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ (သို့) သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံနှိပ်ဒီဇိုင်းကိုပေးနိုင်သည်၊ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်အိတ်ဆွဲ.
ခေါက်နိုင်သော & SUPER LIGHTWEIGHT: ၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစားဖြင့်လျင်မြန်စွာသူ့ဟာသူခေါက်နိုင်သည်။
ကြီးမားသောတိုင်းတာခြင်း: 45 * 34cm သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ သင်၏လက်ကိုင်အိတ်များကိုသိုလှောင်ရုံသာမကဖိနပ်များ၊ အဝတ်အထည်များသို့မဟုတ်နေ့စဉ်အလှကုန်များကိုလည်းသိုလှောင်နိုင်သည်။ သင့်လက်ကိုင်အိတ်သို့မဟုတ်အဝတ်အစားများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန်၊ တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့။
ကောင်းသောအလုပ်: အနားနှင့်ထောင့်ရှိသတ္တုခလုတ်များနှင့်ပခုံးကြိုးများကိုဖိထားသည့်အစိတ်အပိုင်းအားပိုမိုခိုင်မာစေရန်အတွက်အားဖြည့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဖိအားကျောပိုးအိတ်၏ကြာရှည်ခံမှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
လျှောက်လွှာအားကစား၊ ရေကူးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ နေ့ခရီးများ၊ အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းများ၊ ညအိပ်အနားယူခြင်း၊ အားလပ်ရက်ခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ Streetball၊ သဲသောင်ပြင်အပန်းဖြေခြင်း၊ ယောဂ၊ ကခုန်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ , တောင်တက်ခြင်း, အဖွဲ့လိုက်၊ ကင်းထောက်၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အားကစားရုံ၊ ကျောင်း PE သင်ခန်းစာနှင့်အခြားအရာများ!
ရှေ့သို့ စိတ်ကြိုက် Polyester Drawstring အားကစားကျောပိုးအိတ် Front Mesh Pocket Gym Bag နှင့်အတူ